Ireo fomba 6 hitsarantsika ny olona raha vao mihaona amin'izy ireo isika - Blog
Ireo fomba 6 hitsarantsika ny olona raha vao mihaona amin'izy ireo isika
Rehefa vao mifanena amin'ny olona aho dia manana dimy segondra eo ho eo izy ireo hanombatombako azy ireo ary hamorona ny fahatsapako voalohany. Izany fahatsapana voalohany izany, ny tsara na ny ratsy, dia sarotra ny mamadika na manafoana. Ny ho avy iray manontolo amin'ny fifandraisana dia matetika niforona hatramin'ny voalohany.
Tena tsy fanahy iniako izany. Raha ny marina dia fanaon'ny olombelona ny mitsara ny olona amin'ny fotoana voalohany mifanena aminy. Ataontsika izany na tsapantsika izany na tsia. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahatsapana voalohany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao, manomboka amin'ny asanao ka hatramin'ny an'ny tenanao manokana.
Ireto misy fomba enina hitsarana ny olona raha vao mihaona amin'izy ireo isika ary torohevitra vitsivitsy hanomezana fiheverana tsara voalohany:
famantarana fa misy olona tia anao any am-piasana
Mazava ho azy, ny zavatra voalohany tsikaritray momba ny olona iray dia ny fisehoany. Io no toetra haingana indrindra azontsika jerena. Raha misy olona roa mijoro mifanila aminy ary ny iray mitafy palitao fandraharahana raha ny iray kosa manao akanjo lava voaravaka voalavo, dia tsy hitovy ny fiheveranay voalohany. Na dia mitovy fiaviana sy toerana ara-tsosialy aza ireo olona roa ireo dia mety hieritreritra isika fa manankarena ny iray ary mahantra ny iray.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanehoana fiheverana tsara amin'ny endrika ivelany:
Diniho hatrany ny fitafianao. Inona no akanjo mety amin'izany? Hankany amin'ny fivorian'ny orinasa na barbecue ve ianao? Manaova akanjo foana ho an'ny fotoana. Azonao atao ny mametraka ny fiheverana diso amin'ny fiakanjoana na amin'ny fitafiana.
Raharaham-pihavanana. Ny fisehoana madio sy milamina no fomba tsara indrindra hanomezana fiheverana tsara. Ny volonao ve dia tsy ho hitanao ary tsy ho hitanao? Raha lehilahy ianao, efa voahaingo na voaharatra ny volonao? Raha vehivavy ianao, mety ve ny makiazy amin'ny fotoana?
Mety hanelingelina ny fitaovana. Halaviro ny firavaka izay mafy noho ny fitafianao. Ny firavaka goavambe sy marevaka dia mety hanelingelina olona iray izay vao mihaona aminao voalohany. Aza atsofoka ao am-paosinao ny paosinao na manendaka penina amin'ny akanjonao.
Azo inoana fa hamorona hevitra momba olona iray mifototra amin'ny hoe mitsiky izy na tsia. Ny fitsiky dia mariky ny fisakaizana manerantany, ary ny fanaovana izany dia hahatonga anao ho mora hatonina avy hatrany. Eritrereto izany. Raha mila manontany olona amin'ny olona iray ianao na mitady olona hiresahana - hanatona olona mitsiky ve ianao na olona mibolisatra?
Ny fitsikiana mafana sy manasa dia lavitra be. Ity dia fomba haingana sy mora hampahafantarana amin'ny olona fa sariaka ianao. Mitsiky mandray olona. izy ireo manangana fahatokisana alohan'ny hitenenanao na dia teny iray aza. Rehefa vao mifanena amin'ny olona ianao, dia alao antoka fa mitsiky azy ireo ianao mba tsy ho tsaraina ianao tsy mahalala fomba na tsy liana.
3. Fandraisana tanana
Ny tànan-tànana dia mety ho toa zavatra hafahafa hitsarana olona, ​​saingy mitranga foana izany. Ohatra, raha misy olona manome tànana malemy na malemy amiko, dia mamorona didim-pitsarana avy hatrany ao an-tsaiko aho fa tsy matoky tena izy ireo.
Ireto ny singa iray amin'ny fandraisana-tanana tsara izay mamela fahatsapana voalohany lehibe:
Ampiasao ny habetsaky ny tanjaka. Na dia te hisoroka ny tànana malemy sy malemy aza ianao, dia te hiala tsy hisandoka ho Hulk Hogan ihany koa. Ampiasao ny fihazakazahana mafy miaraka amin'ny herin'ny hery azonao ampiasaina hanokafana ny vavahady. Miezaha mafy , fa aza mandeha tafahoatra.
Tano mandritra ny telo ka hatramin'ny efatra segondra. Izay rehetra lava kokoa dia mety handefa fahatsapana diso, ka hiteraka fivoriana tsy mahazo aina voalohany.
Makà mari-pana tsara. Ny felatanana mifoka dia zavatra tsy tianao tadidy. Ny tanana mangatsiaka dia tsy tsara kokoa. Sasao ny tananao na manafana ny tananao alohan'ny fihaonana lehibe.
Raha ny fahatsapana voalohany no jerena, dia azo inoana kokoa fa tsaraina ianao fifandraisana tsy am-bava fa tsy ny teninao. Ny fitenin'ny vatana dia miteny mafy kokoa ao anatin'ireo segondra vitsy voalohany. Ny fitenin'ny vatana dia afaka mampita fahatokisan-tena, faharanitan-tsaina ary toetra. Rehefa misy olona mijoro mitrongy miaraka am-pelatanany dia mandefa ilay hafatra hoe masiaka izy, tezitra na mikiakiaka. Raha manao izany ianao dia lasa tsy mora hatonina avy hatrany ary tsy hanana fahatokisana intsony.
Fantaro ny fitenin'ny vatanao rehefa mifanena amin'ny olona voalohany ianao. Mety ho mamaivay ny fahitana olona voalohany, fa afaka miezaka mafy mitazona ny anao ianao fahazarana mitebiteby amin'ny fanamarinana. Mitsangàna, mitsikia, mifandraisa amin'ny maso ary ialao ny sandry miampita mba hahazoana antoka fa tsy mandefa hafatra tianao kokoa ny mandefa ny fiteninao.
Ahoana ny fomba hitsaharana ny fitsaràn'ny hafa (Ary ny tenanao)
Ahoana ny fomba handraisana ny hafa amin'ny maha-izy azy (fa tsy ny tianao hahatongavanao)
Fiatoana fahatokisana 10 ho an'ilay olona tsy dia mendrika ara-tsosialy
15 Toetoetran'ny olona malala-tsaina
Fantatrao ve fa tsaraina ianao alohan'ny hahatongavanao? Ny iray amin'ireo fomba haingana indrindra hanaovana fiheverana ratsy voalohany dia ny tara. Rehefa sambany mifanena amin'olona ianao dia antenaina fa ara-potoana. Ny fahatongavana ara-potoana dia ahafahan'ny olona iray hafa mahalala fa manaja azy ireo sy ny fotoanany ianao.
rahoviana indray i dean ambrose no hiverina
Mikasa ny ho tonga farafahakeliny minitra vitsy, rehefa mihaona amin'ny olona voalohany. Omeo efitrano mihozongozona be dia be ianao mba hahitanao ny fivezivezena na very. Tsy misy fialan-tsiny tsara raha tara amin'ny fihaonana voalohany.
6. Fomba fomba
Isika rehetra dia samy manana ny fomba fanao kely tsy ampoizina, fa ny tena marina dia ianao no mitsara anao. Mety aza manao ny rariny , fa ny olon-kafa mbola tsy mahalala anao. Raha mankarary fo ianao, miiba ivelany, mampiasa fiteny ratsy, mifoka sigara na manana fahazarana mijery telefaona isaky ny minitra vitsy dia handefa fahatsapana fa mety tsy te-handefa ianao.
Eritrereto ireo olona nihaona taminao taloha izay namela tsiro ratsy teo am-bavanao teo noho eo. Inona no fomba nananan'izy ireo izay namono anao? Eritrereto izao ny fombanao. Na dia mety tsy mampaninona an'ireo kiborinao kely aza ny tsimokarinao tsara indrindra, dia mety ho hitan'ny olona sasany fa tsy manintona izy ireo rehefa vao mifanena aminao. Miezaha hanana fitondran-tena tsara mandra-pahafantatra olona iray.
Toetran'olombelona ny mitsara ny olona raha vao mifanena aminy isika, ary tsy zavatra ratsy foana izany. Betsaka ny olona eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary amin'ny alàlan'ny fametrahana sivana, dia afaka manaisotra ireo izay tsy irintsika hampiasa vola amin'ny fotoanantsika sy ireo izay tsy afaka manome lanja ny fiainantsika intsony. Raha ny marina, nisy ny fanadihadiana natao izay mampiseho ny fiheverana voalohany dia tena marina tokoa amin'ny fandrefesana ny tena toetrany sy ny fahaizan'ny olona iray. Ka eritrereto hoe inona ny karazana fahatsapana voalohany tianao apetraka amin'ireo olona mifanena aminao. Ireto segondra vitsy voalohany ireto dia tena ilaina tokoa, ka alao antoka fa vonona ny hanaloka azy ireo ianao!
ny fomba hialana amin'ny sipa taloha
fahasamihafana eo amin'ny fitiavana sy ny fitiavana olona
ny fomba fampiononana ny namana mandalo fisarahana
ny fomba hiatrehana sipa sahirana
tononkalo momba ny famoizana olon-tiana
mamerina ny fanambadianao amin'ny laoniny